Regedza Kufona Vashambadzi Vane Usimbe! | Martech Zone
Regedza Kufona Vashambadzi Vane Usimbe!
China, Kurume 17, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Vhiki rino, ndakaverenga imwe posvo uko vatengesi vaidaidzwa kuti "simbe". Iyo inogara ichiita kunge isiri-yekushambadzira indasitiri pundit inodhonza iyo "simbe" inokonzeresa uye pakupedzisira yazosvika kwandiri. Anotumira email murume uyo asina kumbobvira akwanisa mushandirapamwe anodana mutengi wake nousimbe. Yekushambadzira mbozhanhare inotaura nezve vatengi vavo vasingashandise kunyorera nekuti vane husimbe. Yemagariro midhiya mukomana ari kutaura nezvevashambadzi kwete kuongorora kana kupindura kana zvataurwa online… simbe.
Saka… nguva yeimwe yevaridzi vangu.
Kuve blogger, mutauri, kana kunyangwe anonzi anonzi "nyanzvi" - nyanzvi yenyaya - zviri nyore. Tinosvika pakufamba tichinongedzera munhu wese zvigunwe tovaudza zvavari kutadza. Iri nyore basa… uye shanda zvandinoda zvechokwadi. Kana iwe uine nzwisiso yakanaka kwazvo yeindasitiri, iwe unogona kubatsira akawanda makambani pasina kunyatso kuchera zvakadzika zvakanyanya. Asi zvinogara zviri nyore kutaurira vanhu zvavari kutadza kana iwe usiri uine basa rekuita uye kuzvidavirira kuti uwane mhedzisiro.
Kuva mushandi hakusi nyore. Kuva mushambadzi kwakatonyanya kuoma. Nepo mabasa mazhinji akazvirerutsa pamusoro pemakore, isu takawedzera zviyero zvisina mwero zvematanho nemasvikiro kumahwendefa evatengesi vedu. Pane imwe nguva, kuve mushambadzi zvaingoreva kuyedza kushambadzira kana maviri paterevhizheni, redhiyo kana mupepanhau.
Kwete zvekare… isu tine masvikiro asingaverengeke munhau dzezvemagariro ega - usambofa wakazvifunga kushambadzira kwetsika uye kwepamhepo. Heck, isu tine SERE nzira dzekutengesa pafoni mbozha… SMS, MMS, IVR, Email, Zvemukati, Kushambadzira Nhare, Zvikumbiro zveMafoni neBluetooth.
Panguva imwecheteyo yatakanyanya kuwedzera huwandu hwemasvikiro, nzira dzekutarisa nekudziongorora, uye nzira dzekugadzirisa nekuvandudza imwe neimwe… pamwe nekuwana imwe sosi yekupa imwe, isu tanga tichideredza zviwanikwa mukati izvo izvo vashambadzi zvaiwanzo kuve nazvo munguva yakapfuura.
Nhasi, ndanga ndiri parunhare nekambani yepasi rose yekugadzirisa zvinhu ine mawebhusaiti mana akasiyana munyika ina dzakasiyana uye nechikwata che4… iye pachake. Anotarisirwa kuenderera mberi nekukwiridzira yega yega saiti mudunhu uye nekukudziridza kushambadzira kwavo mukati - vasina bhajeti uye vasina zvemukati manejimendi sisitimu inotsvaga-injini inoshamwaridzika.
Nyaya dzenyanzvi nyanzvi hadzina misangano, hofisi zvematongerwo enyika, ongororo, zvipingamupinyi zvebhajeti, kushomeka kwetekinoroji, kushomeka kwezviwanikwa, zvikamu zvevatariri, kushomeka kwezviwanikwa zvedzidzo, uye marongero epurogiramu kutadzisa kufambira mberi kwavo sezvinoita mushambadzi. Inotevera nguva iwe paunofunga kufonera mushambadzi ane husimbe, tora maminetsi mashoma uye woongorora nharaunda yavo… iwe unogona here kubudirira izvo zvavanazvo?
Ini ndinoshanda nemamwe makambani uko zvinoda mwedzi yekuronga kungo gadzira diki kune iwo theme yewebsite… mwedzi! Uye zvinoda misangano isingaverengeke uye zvidimbu zvevane mamaneja vasina kudzidza avo vanofanirwa kuongorora nekutendera maitiro acho. Izvo izvo vamwe vatengesi vanokwanisa kukweva hazvisi zvishomana nechishamiso mazuva ano chakapihwa matambudziko uye zviwanikwa.
Dzvanya Mune Vamwe Vashanyi Vatsva naTynt
Jesubi: Chakareruka Chidimbu Chizvarwa
Mar 17, 2011 pa 11: 31 PM
Nzira yekuenda nayo Douglas. Vanhu vazhinji havazivi basa guru remutengesi. Ini handisi mushambadzi. Asi ndinotenda zvikuru nezvaanazvo mukambani yedu. Zvigunwe kumusoro kwauri.
Mar 22, 2011 pa 12: 27 PM
Zvakaoma chaizvo kuva mutengesi.